सौराहाको पर्यटनमा भो ७ अर्ब लगानी, अझै नयाँ लगानी थपिँदै (फाटोफिचर) – .:: Welcome to Saurahaonline.com |
सौराहाको पर्यटनमा भो ७ अर्ब लगानी, अझै नयाँ लगानी थपिँदै (फाटोफिचर)
१९ आश्विन २०७४, बिहीबार १७:३९
चितवन, १९ असोज । देशकै तेश्रो पर्यटकीय नगरी सौराहामा ७ अर्ब रुपैया लगानी भएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी सेक्टर प्रवेशद्धारको रुपमा रहको सौराहामा पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै ७ अर्ब रुपैया लगानी पुगेको क्षेत्रिय होटल संघले जनाएको छ ।
वन वन्यजन्तु, जौविक विविधता र स्थानिय थारु संस्कृतिमा आस्रित सौराहामा साना देखि ठूला होटल गरि हाल ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको क्षेत्रिय होटल संघका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।
माओवादी दश बर्ष जनयुद्धका कारण सिथिल बनेको सौराहामा शान्ति प्रक्रिया आएसगैँ पर्यटन फष्टाउदै आएको हो उनले भने । अहिले सामन्य होमस्टे देखि सुविधा सम्पन्न होटल समेत गरेर यहाँको लगानी ७ अर्ब पुगेको हो ।
उनका अनुसार यो लगानी भौतीक संरचना र त्यहाँ सावारी साधन र अन्य वस्तुहरुको रहेको बताए ।
शान्ति सुरक्षामा सुधार आएकाले विषेशगरी व्यवसायीले होटलमा करोडौंको लगानी गर्न थालेका थिए ।
तत्कालिन अवस्थामा १० करोड बढीको लागतमा क्यासिनोसहितको होटल सेभेन स्टार खुलेको दुई महिना नबित्दै करिब १५ करोडको लागतमा सौराहाको बाघमारामा अर्को एउटा सुविधायुक्त ल्यान्डमार्क फरेस्ट पार्क र सौराहाको मैनाह नजिक होटल सेन्टल पार्क समेत सञ्चालनमा आएको थियो । यो सगैँ यहाँ पुराना होटलहरुले समेत आफ्नो लगानी वृद्धि गरेका थिए ।
यि हुन् उत्कृष्ट होटल
सौराहामा आउने वित्तिकै धेरैलाई लाग्न सक्छ ? कुन हुन् त पाँच उत्कृष्ट र सुविध सम्पन्न होटल । सौराहामा लगानी र सुविधामा सम्पन्न दुवै हिसाबले यि हुन् उत्कृष्ट होटल ।
सौराहामा सबैभन्दा पुरानो र सुविधा सम्पन्न होटल प्याराडाईज, होटल ग्रीन पार्क, ल्याडमार्क, होटल, सेभन स्टार र होटल सेन्टल पार्क रहेका छन् ।
भने त्यसपछि लगानी र स्तर वृद्धि गरेका होटलमा सपना भिलेज लज, होटल जंगल क्राउन, होटल बाईल्ड लाईफ क्याम, होटल जंगल सफारी लज, पार्क ल्याण्ड, जंगल र्बल्ड रिर्सोट र होटल रोयल सफारी रहेका छ ।
धमाधम स्वमीङ्ग पुल निर्माण गरिदै
सौराहामा रहेका ठुला होटलहरुमा मात्रै स्वमीङ्ग पुल रहेकोमा यतिवेला स्तरवृद्धि गरेका होटल समेत स्वमीङ्ग पुल निर्माण भईरहेका छन् । पर्यटकहरुको चाहान र माग अनुसार आफुहरुले स्वमीङ्ग पुल निर्माण गरेको संघका निर्वतमान अध्यक्ष एवं होटर रेनफरेष्टका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रकुमार विष्टले बताए ।
यतिवेला उनले मात्रै नभएर होटल जंगल क्राउन, होटल पार्क ल्याण्ड, होटल वाईल्ड लाईफ क्याप, होटल जंगल र्वल्डमा समेत स्वमीङ्ग पुल निर्माण गरि सञ्चालनमा आईसेकेको छ ।
सौराहामा २० करोडभन्दा बढी लगानीका होटल तीज दर्जन भइसकेको क्षेत्रिय होटल संघका कोषाध्यक्ष शिरलाल परियारले बताए ।
सौराहा अझैँ पनि नयाँ होटल खुल्ने थिए उनले भने तर यतिवेला भुकम्प, नाकावन्दी सगैँ फेरि बाढीले यो ठाउँको पर्यटन ठप्प पारेका कारण थप लगानी आउन नुसकेको हो ।
सबै गरेर यहाँ १०० सुविधायुक्त होटल खुलिसकेका छन् भने लगानी गर्ने क्रम जारीरहेको क्षेत्रीय होटल सघ सौराहाले जानकारी दिएको छ ।
संगीतिक रेष्टुरेन्टले पर्यटकहरुको मन तान्दै
सौरहामा आउने धेरै पर्यटकहरुको चाहान अनुसार यतिवेला पव म्यूजिक र सागिंतक रेष्टुरेन्ट खुलेका छन् ।
क्षेत्रिय होटल संघका कोषाध्यक्ष समेत रहेका शिरलाल परियार र कलाकार सन्तोष पन्तको छोरा साकार पन्तको लगानीमा सञ्चालनमा आएको लायन डेन सञ्चालनमा छ । लायन्स डेन (पव एण्ड म्युजिक बार) जहाँ खानाका परिकारका साथ सांगितको आनन्द लिन लायन्स डेनमा लाईभ म्यूजिक सहित विभिन्न चर्चीच डिजेको साथमा डान्समा समेत रमाउन सकिन्छ । जहाँ पूर्ण पारिवारिक वातावरण विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी परिकारहरुको समेत मज्जा संगीत र डान्सको साथमा लिन सकिन्छ ।
साथै यहाँ हरेको शुक्रबार र शनिबार विशेष लाईभ व्याण्डको पनि सँगसँगै प्रस्तुति हुने गर्नछ । भने यतिवेला चाडवाडको वेलामा क्रमशसगैँ विभिन्न चर्चीत गायकगायिका र डिजेहरुको प्रस्तुती पनि सुरु हुने सञ्चालक परियारले बताए चितवनमा नै पहलो पटक स्वेदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई लक्षित गरि आधुनिक प्रविधि सहित सौराहा मै एक मात्र सुविधायुक्त पव एण्ड म्युजिक बार हो ‘लायन्स डेन’ हो । करोडौंको लागतमा बनेको यो म्युजिक बारले सौराहामा आउने पर्यटकहरु नयाँ प्याकेजका रुपमा स्थापित भएको थियो ।
भने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यिटकहरुको मागलाई मध्येनजर गर्दैै गीत संगीतसहित विभिन्न खानाका परिवारको स्वादको मज्जा एकसाथ लिन नयाँ प्योकजका रुपमा “बलेसी रेस्टुरेन्ट” सञ्चालनमा छ ।
जंगल सफारी, हात्ती सफारी, डुङ्गा सयर, जीप सफारी, जंगल बाक, गाडा सयर, थारु नयाँको मज्जा लिदै आएका पर्यटकहरुले आएका थिए– बलेसी रेस्टुरेन्टका सञ्चालक विनोद लोप्चनले भने अब साँगितक मज्जासहितको नेपाली र विदेशी हरेक प्रकार परिकारको स्वादमा पर्यटकहरु रमाएका छन् ।
सिङ्गे गैडा, बाटे बाघसहितका जनावर र जौविक विविधताको अवलोकनमा लालायित
काठमाडौँ र पोखरापछिको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहा हो । त्यहाँ जाने पर्यटक एक सिङ्गे गैडा, बाटे बाघसहितका जनावर र जौविक विविधताको अवलोकनमा लालायित हुने गर्दछन् ।
व्यवसायीले पर्यटकलाई प्याकेजको व्यवस्था गरेर सबै सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
निकुञ्जमा जिप सफारी, हात्तीबाट वन सफारी, डुङ्गा सयर, इलिफेन्ट बाथ, राप्ती नदीमा सूर्यास्तको दृश्य, जङ्गल घुमफेर, हात्ती प्रजनन् केन्द्र अवलोकन, निकुञ्जका गोही प्रजनन, कछुवा संरक्षण र गिद्ध संरक्षण केन्द्र अवलोकन गर्दै पाटे बाघ, एकसिङ्गे गैँडासहितका वन्यजन्तु र सुन्दर चराचुरुङ्गगीहरुको प्रत्यक्ष अवलोकन एवम् थारुको संस्कृति अवलोकनमा पर्यटक लोभिने गर्दछन् ।
चितवनको सौराहा मात्रै नभई भरतपुर, पटिहानी, जगतपुर, मेघौली, का होटलहरूमा पनि आन्तरिक पर्यटकको सख्या ह्वात्तै वढेको छ ।
सौराहामा ७० वटा रेष्टुरेन्ट र ११० वटा साना ठुला होटलहरु रहेका छन् ।